ISO 18000-6C အမှတ်အသားများနှင့် ISO 18000-6B အမှတ်အသားများအကြားကွာခြားချက်
ISO 18000-6C အမှတ်အသားများနှင့် ISO 18000-6B အမှတ်အသားများအကြားကွာခြားချက်ISO 18000-6B TagsISO 18000-6C Tags
လက်ရှိအချိန်မှာ, ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုံ UHF RFID စာဖတ်သူများနှင့် RFID module များတွင်ရွေးချယ်ရန်စံနှုန်းနှစ်ခုရှိသည်, အမည်ရ ISO18000-6B နှင့် ISO18000-6C (EPC Class1 Gen2) စံချိန်စံညွှန်းများ. ဒီစံနှုန်းနှစ်ခုကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်များရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်, ဒီတော့ခြားနားချက်များဘာတွေလဲ?
1. ISO18000-6B အထိဖတ်နိုင်သည် 10 တစ်ကြိမ်မှာ tags များ, အသုံးပြုသူဒေတာareaရိယာကြီးမားသည်, အချက်အလက်ပေးပို့နှုန်းသည် 40Kbps ခန့်ရှိသည်. ISO18000-6B tags များကိုယေဘုယျအားဖြင့်တံခါးပိတ်နေရာများတွင်အသုံးပြုသည်, ထိုကဲ့သို့သောပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအဖြစ်.
2. EPC C1G2 သည် ISO18000-6C ဖြစ်သည်, အရာတစ်ချိန်တည်းမှာ tags များရာပေါင်းများစွာကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်, အသုံးပြုသူဒေတာareaရိယာသေးငယ်သည်, နှင့်ဒေတာထုတ်လွှင့်မှုနှုန်း 40Kbps-640Kbps ဖြစ်ပါတယ်. ယေဘူယျအားဖြင့် ISO18000-6C tags များကို open-loop area များတွင်အသုံးပြုသည်, ထိုကဲ့သို့သောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖြစ်.
ISO 18000-6C ၏အောင်မြင်မှုမှာ passive tag ၏ air data frame ကိုအတိုကောက်ဖြစ်သည်, သောပုံမှန်တိုတောင်းသောဘောင်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဒီလိုမျိုး, နေသမျှကာလပတ်လုံး tag နှင့်စာဖတ်သူကိုအင်တင်နာအကြားရေဒီယိုစွမ်းအင်လွှဲပြောင်းခွအေနအေချက်ချင်းဖွဲ့စည်းသည်အဖြစ်, အဆိုပါဆက်သွယ်ရေးထိထိရောက်ရောက်ပြီးစီးခဲ့သည်, ဒါကြောင့်အစောပိုင်း passive tags များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အသိအမှတ်ပြုမှုနှုန်းသည်အလွန်တိုးတက်လာသည်. Multi- အုပ်စုတစ်စုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်, anti- တိုက်မှုယန္တရား, သိပ်သည်းစာဖတ်သူ - စာရေးဆရာ mode ကို, ပွင့်လင်း ID နှင့်ပုဂ္ဂလိကဒေတာareaရိယာ, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမှကိုယ်စားပြုသောကျယ်ပြန့်သောလျှောက်လွှာများအတွက်ထိရောက်သောအဆက်အသွယ်မဟုတ်သောမှတ်ပုံတင်နည်းလမ်းကိုပေးသည်.
ISO18000-6C တွင်သီးသန့်အချက်အလက်dataရိယာရှိသည်. ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်, မှာယူသူတစ် ဦး ထက်ပိုသောအဆင့်ရှိသည့်သုံးစွဲသူများကသာမှာယူတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂလိကဒေတာareaရိယာကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်. ၎င်းသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက် application များအတွက် ISO18000-6C အတွက်စျေးကွက်မဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်, အသုံးမကျသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုစစ်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည် (ဝယ်လိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားနှစ်ခုစလုံးချွေတာကြသည်မဟုတ်). ပုံမှန် applications များ၌တည်၏, ဒီဒေတာareaရိယာကို Access and Kill နှစ်ခုရဲ့သော့ခလောက်ဖြင့်ကာကွယ်ထားနိုင်သည်. ပြီးတာနဲ့သော့ခတ်, အဲဒါကိုထိန်းချုပ်မှုစကားလုံးမပါဘဲမမြင်ရပါ, AccessPWD ကိုသင်မသိလျှင်ဖတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ. KillPWD တွင် 32bits ရှိသည်, နှင့် 32bitbAccessPWD သည်ငွေအတုအတုနှင့်လုံလောက်သည်. လမ်းပေါ်ရှိ tags များစွာက၎င်းတို့သည် Gen2 ဖြစ်သည်ဟုကြွေးကြော်ခဲ့သည်, တကယ်တော့ ISO18000-6C ရဲ့ ID ပဲ. ဒါဟာ Gen2 အပေါငျးတို့သလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမပေးနိုငျသညျ, အထူးသဖြင့်သူတို့အားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို, စာဖတ်သူလည်း. Gen2 ၌, အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နေရာတွင် 64Byties ရှိသည်. သုံးစွဲသူတစ်သန်းကျော်အတွက်, ဒီinရိယာထဲမှာတစ် ဦး ချင်းစီက byte သော့ခတ်နိုင်ပါတယ်, ကိုဖတ်ရှုသာ, ဖတ်ရေး, နှင့်ဖတ်ရှုခြင်းကိုသော့မပါဘဲတားမြစ်သည်. အလွန်စံပြထုတ်ကုန်.
—- သင် ISO18000-6C နှင့် Gen2 အကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြောရန်ရှိပါက, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရန်, ISO18000-6C သည် Gen2 ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. Gen2 တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အရွယ်အစားပြောင်းလဲနိုင်သည်, ISO18000-6C ရှိမည်မဟုတ်ပါ.
3. ဒေတာသိမ်းဆည်းရန်, ISO18000-6B ၌တည်ရှိ၏ “ရှေ့တန်း” ပုံစံ, ဒီတော့ tag ကိုစွမ်းရည်ကြီးမားသည်; အဆိုပါ ISO18000-6C ၌တည်ရှိ၏ “နောက်ခံ” ပုံစံ. tag ကိုဖတ်နေအခါ, EPC ကိုဖတ်ရန်နှင့်နောက်ခံဒေတာဘေ့စ်နှင့် တွဲဖက်၍ ဒေတာများကိုဖတ်ရန်သာလိုအပ်သည်, tag ကိုစွမ်းရည်များအတွက်လိုအပ်ချက်နိမ့်သည်.
4. စျေးနှုန်းကွာခြားချက်: ISO18000-6C tags များသည် ISO18000-6B tags များထက်စျေးနှုန်းချိုသာပါသည်, သင့်ရဲ့စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ.
prev: JCOP4 စီးရီး JAVA ကဒ်များကောင်းကျိုးများ (J2R110|J3R110|J2R150|J3R150|J3R180) အီလက်ထရောနစ် ID ကိုကတ်များ၏လယ်ပြင်တွင်